Luka Modric Oo Abaalmarinta Xiddiga Adduunka Kula Dagaallamaya Lionel Messi Iyo Cristiano Ronaldo | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Luka Modric Oo Abaalmarinta Xiddiga Adduunka Kula Dagaallamaya Lionel Messi Iyo Cristiano Ronaldo
Published on June 24, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(25-6-2018) Xiddiga xulka qaranka Croatia ee Luka Modric ayaa ku biiray ciyaaryahannada liiska hore kaga jira liiska murashaxiinta abaalmarinta xiddiga adduunka ee Ballon d’Or.
Luka Modric oo xulka dalkiisa Croatia u horseeday in labadii ciyaarood ee u horreeyey ee Koobka Adduunka ay guulo waaweyn ka gaadhaan Nigeria iyo Argentina, ayaa sidoo kale waxa uu bandhig ciyaareed cajiib ah muujiyey xili ciyaareedkii tegay oo dhan, waxaana uu naadiga Real Madrid ka caawiyey inay ku guuleystaan tartanka Champions League markii saddexaad oo xidhiidh ah.
32 jirkan oo tan iyo sannadkii 2012 ka mid ahaa ciyaaryahannada rigliga ah ee Real Madrid ayaan marna ku guuleysanin xiddignimada adduunka, hase yeeshee sida ay dad badan aaminsan yihiin xili ciyaareedkan ayaanay jirin cid kaga mudan haddii uu dalkiisa Croatia ka caawiyo inay meel fiican ka gaadhaan Koobka Adduunka.
Difaacyahanka kooxda kubadda cagta Liverpool ee Dejan Lovren ayaa ka mid ah dadka aaminsan in Modric ay sannadkiisii noqon doonto, hase yeeshee, waxa uu ku dooday in mar horeba uu u qalmayey in lasiiyo xiddignimada, laakiin dalka uu kasoo jeedo daraadeed uu ku hadhayey.
“Sababta aanu Modric ugu guuleysan xiddignimadu waa in aanu nahay waddan yar, waxaana lasiiyay dareen ka yar intii uu u qalmayey.” Sidaas waxa yidhi Lovren oo la hadlay warbaahinta xilli uu ku sugan yahay waddanka Ruushka oo uu dalkiisa Croatia kala qayb-gelayo Koobka Adduunka.
“Modric waxa uu heli lahaa dareen ka badan inta hadda la siiyo, haddii uu Jarmal ama Spanish. Xattaa waxa suurtogal ahaan lahayd inuu abaalmarinta xiddiga adduunka ee Ballon d’Or ku guuleysto.” Ayuu mar kale yidhi Lovren.
Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ayaa tobankii sannadood ee u dambeeyey si isle’eg u qaybsanayey xiddignimada adduunka, waxaana uu mid walbaa ku guuleystay shan jeer, hase yeeshee waligeed may dhicin in ciyaartoy u dhashay waddanka Croatia uu hantiyo abaalmarintan inkasta oo sannadkii 1998 uu kaalinta labaad galay Dovor Suker oo ku guuleystay kabta dahabka ah ee Koobkii Adduunka ee lagu qabtay waddanka Faransiiska.
Luka Modric ayey Real Madrid kala soo wareegtay Tottenham, waxaana uu muddadii uu joogay kula guuleystay afar jeer tartanka Champions League, hal koob oo LaLiga ah iyo hal mar oo Copa del Rey ah.
Xilli ciyaareedkii tegay waxa uu caawiye ka noqday lix gool, hase yeeshee bandhiggiisa kale ayaa ahaa mid layaab ah, waxaana uu dhamaystiray 89.9% kubbadihii uu bixiyey, hase yeeshee labadii ciyaarood ee xulka qarankiisa ee Koobka Adduunka, waxa uu si cajiib ah ugu guuleystay inuu dhaliyo laba gool saddex laag oo uu ku ganay goolka iyo sidoo kale inuu si guulleh u dhamaystiray kubbadihii uu bixiyey 84.5%.